Fehezanteny - Wikipedia
Ny fehezanteny dia teny na andian-teny tononina na soratana manara-pitsipika ka azo ampitana hafatra mahaleo tena noho izy azo sarahana amin'ny hafa izay mety hitovy asa aminy. Raha soratana ny fehezanteny dia azo ampanombohina amin'ny sora-baventy ka faranana amin'ny teboka, ary izany tokoa matetika no famaritan'ny boky fianarana fitsipiteny ho an'ny ankizy azy.
Ny fehezanteny ahitana teny roa na mihoatra no tena mateti-piseho, nefa raha teny iray no mamorona ny fehezanteny dia matetika isan'ny sokajin-teny afaka mahaleo tena, toy ny anarana sy ny matoanteny sy ny mpamari-toetra ary ny tenim-piontanana, io teny io. Mety ho tambinteny koa izany.
Raha andian-teny ny fehezanteny dia tokony ho fitambaran-teny atohy amin'ny fanajana ny fitsipiky ny fifehezanteny (isan'izany ny fandaharana ny teny, ny fampiasana mpampitohy sy mpampiankin-teny na mpampiankina fehezankevitra) ka matetika ahitana entimilaza sy lazaina (ary fameno, raha mitaky izany ny fitsipika mifehy ny karazan'ilay fehezanteny).
Ireo sokajin-teny voatanisa farany ireo, izay misahana anjara asa mampifandray ny teny anaty fehezanteny na anaty andian-teny (atao hoe tarika), dia tsy afaka mandeha mitokana raha tiana holasa fehezanteny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fehezanteny&oldid=975030"
Voaova farany tamin'ny 26 Septambra 2019 amin'ny 12:21 ity pejy ity.